ဖူးနုသစ်: ဇော်ဂျီ နဲ့လူမိုက်အားပေး ဘလော့ဂါများ
ယူနီကုတ်နဲ့ ဇော်ဂျီပြသနာ တစ်ခါ ပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ အပေါ်ယံကြည့်ရင် ဇော်ဂျီနဲ့ Myanmar3 ဖောင့် တိုက်ခိုက်နေတယ် ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယူနီကုတ် စံနှုန်းကို လိုက်နာတဲ့ဖောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေ (မြန်မာ၃၊ ပိတောက်၊ ပုရပိုက်၊ မိုင်မြန်မာ) နဲ့ ယူနီကုတ် စံနှုန်းကို မလိုက်နာတဲ့ ဇော်ဂျီရဲ့ တိုက်ပွဲပါ။ အများနဲ့ တစ်ယောက်၊ အမှန်နဲ့ အမှား ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တဲ့သူ မှားနေတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဂျီက အားသာနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲ မေးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လို လူမိုက်အားပေး လုပ်နေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ ကြောင့်ပါပဲ။
ယူနီကုတ် ၅.၁ ဘက်က ရပ်တည်တဲ့ သူများ စကား အပြောအဆို မတတ်ကြပါဘူး။ အပြော မတတ်တော့ ဆဲသလို ဖြစ်ပါတယ်။ User တွေကို ဇော်ဂျီသုံးတဲ့အတွက် အနာဂတ်မှာ ဘာပြသနာတွေ ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာ အေးအေးဆေးဆေး မရှင်းပြဘဲ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီး စစ်မျက်နှာဖွင့် တိုက်ပါတယ်။ အမှန်တရား ပေမယ့်လည်း ပိသလေးဘေးပစ် ကြားရတော့လည်း ကြားရတဲ့သူတွေဘက်က အမြင်ကတ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီဖက်ကတော့ ဒီတစ်ခါလည်း User တွေ ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီး ဖွင့်လာပြန်ပါပြီ။ User တွေမှာ ရွေးချယ်မှု ရှိတာကို ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ဖို့ အတွက် သတင်းအချက်အလက်ကိုတော့ အမှန်အတိုင်း ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူညီညီ မညီညီ ဤဟာဤ ကျွဲဟာကျွဲ ပါပဲ။ User တွေ ဘယ်လောက် အသုံးများများ ဇော်ဂျီဟာ ဘယ်တော့မှ ယူနီကုတ် စံနှုန်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ User တွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်တာလဲ မေးရင် ကျွန်တော် သိသလောက် ဖြေပါမယ်။ ဇော်ဂျီဟာ ယူနီကုတ် စံနှုန်းကို လုံးဝ မလိုက်နာ ထားပါဘူး။ ယူနီကုတ် စာတမ်းကို အကြမ်းမျဉ်း လှန်လှောပြီး ဖတ်ရင်တောင် တွေ့နိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေက အစ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အလွယ်လမ်း လိုက်ထားပါတယ်။ Globalization ခေတ်ကြီးမှာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းဆိုတာ အရေးပါတဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက သဘောတူထားတဲ့ စံနှုန်းကို မလိုက်နာဘဲ လုပ်နေကြအတိုင်း အားလုံးကို မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် နဲ့ သွားကြမယ် ဆိုပြီး ခေါင်းမာနေကြမယ် ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အထူးတလည် ဘာမှ ထပ်ပြီး ပြောနေစရာ မရှိပါဘူး။
ဇော်ဂျီသုံးလို့ ဘာပြသနာမှ မရှိဘူး ဆိုပြီး ပြောနေကြပါတယ်။ အချိန်တန် ကွန်ဗာတာထဲထည့် ယူနီကုတ် ပြောင်းလိုက် ဖြစ်သွားတာပဲ ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ Database ထဲက Unicode Normalization ကိစ္စကို ဘယ်သူမှ ထည့်မပြော ကြပါဘူး။ ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ စိတ်ကူးယဉ် ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာအွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်းမှာ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယူနီကုတ် ၅.၁ စနစ် ထွက်တော့ MySQL က သူတို့ ဒေတာဘေ့စ်ထဲမှာ မြန်မာစာ ကိုပါ ယူနီကုတ် စံနှုန်းအတိုင်း သိမ်းဆည်းလို့ ရအောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ MySQL ဒေတာဘေ့စ် ကို သုံးထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာအွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း ထဲမှာ ယူနီကုတ် စနစ်မဟုတ်တဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေ အကုန်လုံး သုံးမရအောင် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ Backup ရှိလို့သာ တော်ပါသေးတယ်။ မြန်မာ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်းမှာ ကိုယ့်ဒေတာဘေ့စ်ကိုယ် ကိုင်တာမို့ ဘာမှ ပြသနာ မရှိပါဘူး။ ဒေတာဘေ့စ်ကို မြန်မာစာ နားမလည်အောင် ရူးချင်ယောင် ဆောင်ခိုင်းလိုက်လို့ ရပါတယ်။ အကယ်၍ Google ကသာ သူတို့ရဲ့ ဒေတာဘေ့စ်ကို မြန်မာစာ နားလည်တဲ့ ဒေတာဘေ့စ် အဖြစ် Upgrade လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Blogspot ပေါ်မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဘာဖြစ်သွားမလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါ။ မြန်မာအွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်းမှာ လုပ်တုန်းကလို ဒေတာဘေ့စ်ကို မြန်မာစာ နားမလည်အောင် ရူးချင်ယောင်ဆောင်ခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ Blogspot ထဲမှာ ဒေတာဘေ့စ်ကို ကျွန်တော်တို့ လိုသလို ပြင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး မရှိပါဘူး။ ဒီကိစ္စ သေသေချာချာ သိချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုစိုးမင်းတို့ ၊ မြန်မာသင်ကာတို့ ၊ အိုကိစံတို့ကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အခုလက်ရှိ Microsoft က မြန်မာစာကို တရားဝင် Support မလုပ်သေးပါဘူး။ Microsoft ကသာ မြန်မာစာကို တရားဝင် Support လုပ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် နောက်ထပ် ပြသနာ တစ်ခု လာပါတော့မယ်။ Microsoft က ဇော်ဂျီ စံနှုန်းနဲ့ သွားမှာ မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတကာက သဘောတူထားတဲ့ ယူနီကုတ် စံနှုန်းနဲ့ပဲ သွားမှာပါ။ အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ Microsoft က ဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုင်းကို Workaround လုပ်ပြီး သုံးချင်သုံး မသုံးချင်ရင်လည်း မြန်မာစာ မသုံးဘဲ ပစ်ထားလိုက်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
ဇော်ဂျီဖောင့် သုံးတာများ လွယ်လွယ်လေး Download တစ်ချက်လုပ် Install လုပ်လိုက် ပြီးသွားတာပဲ။ ဘာကိစ္စ ကြောင်ပူနေရတာလဲ မေးချင်တဲ့သူလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာနဲ့ကိုယ် အင်တာနက် သုံးဖို့ အခွင့်အရေး မရှိပါဘူး။ ကျောင်းက ကွန်ပြူတာ၊ ရုံးက ကွန်ပြူတာ၊ အင်တာနက် ကဖီးက ကွန်ပြူတာများနဲ့ အင်တာနက် သုံးရတဲ့ အခါများလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကိုယ့်မှာ အက်ဒမင် အခွင့်အရေး မရှိတဲ့အတွက် ဖောင့်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး သုံးလို့ မရပါဘူး။
နိုင်ငံတကာကို ရောက်ရင် အတော် မျက်နှာငယ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ကဖီးမှာ ကိုယ့်ဘေးက ဂျပန်က ဂျပန်စာတွေဖတ်၊ ကုလားက အိန္ဒိယစာတွေ ဖတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ လေးထောင့်တုံးတွေပဲ ထိုင်ကြည့်နေရပါတယ်။ အကြံအဖန်လုပ် ဖောင့်သွင်းပြီး ဖတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့်လည်း အက်ဒမင် အခွင့်အရေး မရှိလို့ ဘာမှ လုပ်မရပါဘူး။ မြန်မာစာကို Windows ထဲမှာ Native Language တစ်ခု အနေနဲ့ ပါလာမယ့် အချိန်ကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီ အချိန်ကျရင် Native Language Support ကို သုံးပြီး ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာကို ဖတ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘဲ ယူနီကုတ် ၅.၁ နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာပဲ ဖတ်လို့ ရမယ် ဆိုတာကို User တွေ အနေနဲ့ သိထားသင့် ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု က ဘာသာပြန် ကိစ္စပါ။ အခု Open Office.org 3.1 ကို မြန်မာလို ပြန်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်လို့ ကိစ္စ မရှိပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မတတ်တဲ့ မြန်မာတောသူတောင်သားတွေ ကွန်ပြူတာ သုံးနိုင်တဲ့ ခေတ်ကို မျှော်ကြည့် ရပါမယ်။ သူတို့ အတွက် ထည့်စဉ်းစား ပေးရပါမယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို မြန်မာလို ပြန်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုနိုင်မယ့်သူ ပိုများ လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ် အသိုင်းအဝန်း (Community) အချို့ က ယူနီကုတ် စနစ်ကို မလိုက်နာတဲ့ ဇော်ဂျီကို ဘာသာပြန်တဲ့ နေရာမှာ သုံးဖို့လက်မခံပါဘူး။ သူတို့ အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ယူနီကုတ် ၅.၁ ကိုပဲ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာစာ အသုံးပြုသူ အများစုက ဇော်ဂျီကို သုံးနေကြတဲ့အတွက် ယူနီကုတ်နဲ့ ဘာသာပြန်မယ့်သူ နည်းနေပါတယ်။ အပေါ်ယံကြည့်ရင် မဆိုင်ဘူး ထင်ရပေမယ့် သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသာ ယူနီကုတ် ၅.၁ သုံးနေကြရင် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဘာသာပြန်မယ့်သူ ဒီထက်မက များလာနိုင်တယ် ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
နောက်တစ်ခုက တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား ကိစ္စပါ။ ဒီကိစ္စကလည်း မှန်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီက စကောကရင်၊ ပိုးကရင် အစရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေအတွက် သတ်မှတ် ထားတဲ့ ကုတ်ဒ်ပွိုင့်တွေကို ယူသုံးထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေ အတွက် ဇော်ဂျီက သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဖောင့်ကို သုံးရင်သုံး မသုံးရင်တော့ မြန်မာစာနဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားကို စာမျက်နှာ တစ်ခုတည်းမှာ အတူ မသုံးကြဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ အရိပ်ပြရင် အကောင်မြင်တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာပြသနာ ရှိလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကျွန်တော် ဒီပြသနာကို အေးအေးဆေးဆေး ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာအိုင်တီပရိုမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုတ် ၅.၁ အဖွဲ့တွေကြား ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်ရဲ့ ကော်ပီကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြသနာက ဇော်ဂျီဖောင့် ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဖက်က အားလုံးနဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့ မကြိုးစားဘဲ ငါတို့ဖောင့်ကို လူသုံးများတာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း ဘာလို့ လိုက်နာရမှာလဲ ဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုး ချိုးပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့် လူသုံးများရတဲ့ ကိစ္စမှာ User တွေကို သတင်းအချက်အလက် အမှားတွေ ပေးထားတယ် ၊ ယူနီကုတ် အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘဲ ယူနီကုတ်လို့ နာမည် ခံထားတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဝန်မခံပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ရှေ့ဆက်ပြီး ဇော်ဂျီ User အနေနဲ့ လူမိုက်အားပေး လုပ်နေသင့်သလား မသင့်ဘူးလား ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ လို့ ထင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အားလုံးကို တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
Posted by ZT at 12:50 PM
Labels: နည်းပညာ, ပညာပေး, မြန်မာစာ
I agree that 'Unicode adoption' is crucial for full utilization of Myanmar script.
Conscious adoption of Unicode by individual per se might help the migration, but too late for now. It is pointless to blame for doing wrong. Why are we supporting expensive M$ technologies whereas cheaper alternative are available.
The migration have to be solved in evolutionary perspective. Unicode tools (input systems, fonts) have to be robust, practical, readily accessible and incrementally better from user perspective.
As far I see, Myanmar Unicode Migration will take off only when media web sites like BBC, VOA and government sites unanimously deploy Unicode fonts. New way hosting fonts @font-face CSS in new version of Firefox should help them.
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ရေနွေးအိုးထဲက ဖားမလုပ်တော့ဘဲ unicode ကို စမ်းသုံးကြည့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ခက်တာက ဇော်ဂျီတုန်းက ဖောင့်ကို ဘယ်လိုသွင်းရမယ်။ setting ဘယ်လိုပြောင်းရမယ်။ ကီးဘုတ်ကို ဘယ်လိုသွင်းရမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ ရေးထားပေးတဲ့သူတွေက အများသား။ myanmar3မှာကြတော့ မရေးကြတာလား/ myanmar3နဲ့ ရေးထားတာကိုဘဲ ဖတ်မရလို့ ရှာမတွေ့တာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဘလော့ဂ်ဂါ တော်တော် များများသာ ယူနီကုဒ် ပြောင်းသုံးကြရင် တွင်ကျယ်မှု ပိုမြန်မယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ =)
ပြတ််ပြတ် သားသား လို့ ပြောတာ ။ ဆော်ရီး။ :)
ဒီအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့အားလုံး စဉ်းစားဖို့လိုနေပြီ။ ပျတ်ပျတ် သားသား ရပ်တည်ရတော့မယ်။ ကိုယ်ဖြစ်တာ ဘာလဲ။ ကိုယ်လိုချင်တာ ဘာလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ စဉ်စားဖို့လိုပြီ။
ပြောထားသလိုပဲ ဇော်ဂျီက လွယ်တယ်လေ...။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို ပြသာနာတွေ ရှိမှန်းလဲ မသိခဲ့ဘူး...။ ခုတော့ နဲနဲ သိသလိုပဲ..ဒါပေမယ့် အများကြီး နားမလည်ဘူး.။ အဟဲ စာဖတ်သူ ဒုံး ဝေးလို့ပါ ကျေးဇူးပါပဲ..။
ကိုယ့် မြန်မာစာကို တခြားဘာသာစကားတွေလိုပဲ နည်းစနစ်ကျကျနဲ့ ကမ္ဘာမှာ သုံးခွင့်ရစေချင်တယ်။
သေသေချာချာ နားလည်သွားလို့ ရေးနွေးအိုးထဲက ဖားမလုပ်ချင်တော့ဘူး။
ယူနီကုတ်ကို ဘယ်လို သုံးရမယ်။ ဘယ်လိုရယူရမယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း သေချာထပ်ရှင်းပေးပါဦး ကိုဇက်တီရေ။
ဖတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ရော ဘာတွေသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါ နောက်များမှာ ရှင်းပေးပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ပြဿနာ မဟုတ်တာကို ပြဿနာ လုပ်နေကြတာပါပဲ။
Blogger ဆိုတာက တသီးပုဂ္ဂလ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ အဖွဲ့အစည်းကြီး (ဥပမာ ဖိုရမ်အကြီးကြီး) မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းချင်တဲ့အချိန် ထပြောင်းလို့ရပါတယ်။ တချို့သော blogger လက်တဆုပ်စာမှတပါး ကျွန်တော်အပါအဝင် blogger များသည် post အရေအတွက် အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ လောကအလှနဲ့ အင်တာဗျူးတုန်းက ရှင်းပြခဲ့သလို N^2 ရှိတဲ့ algorithm နဲ့ ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တောင် လွယ်လွယ်လေး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်စက်နဲ့ ကိုယ်ပြောင်းကြမှာချည်းပဲ။ ပြောင်းတာလေး ရေးပေးမဲ့လူ ပေါ်လာမှာပါ။
ရေနွေးအိုးထဲက ဖား အဖြစ်က ခုန်ထွက်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာ။ အခုအဖြစ်က ပြောင်းချင်ရင် အချိန်မရွေး ထပြောင်းလို့ရတာ။
ဒါနဲ့ နည်းနည်း ပြောချင်တာက Database Normalization ဆိုတာ အစောက Font (space) နဲ့ ဘာဆိုဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ အဲဒါ သချင်္ာ process ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (Data Integrity ကို တိုးအောင်၊ redundancy ကို လျော့အောင် လုပ်ရတဲ့ process ပါ) စကားလုံး အကြီးကြီးတွေနဲ့ ကိုင်ကိုင်ပေါက်ပြီး မသိတဲ့လူတွေကို မဖြဲချောက်ပါနဲ့။
စကားလုံး အကြီးတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးအနှုန်း လွဲသွားလို့ပါ။ ထောက်ပြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Database ထဲမှာ Unicode Normalization လုပ်တာ ကို ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော် ဘာမှ မသိဘဲ ပရမ်းပတာ လျှောက်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ www.wikimyanmar.com မှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဥပမာ ပေးပြီး ပြောနေတာပါ။ မယုံရင် မြန်မာအွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်းက အက်ဒမင်များကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီနဲ့ပဲ ရိုက်ပြီး comment ပေးလိုက်ပါတယ်။ ;-)
ကျနော်တို့ Unicode 5.1 ကို ပြောင်းဘို့လိုပါပြီ။
ကျနော့်အတွက် အဓိက ပြဿနာက လက်ကွက်ပါ။
font install လုပ်တာက တစ်ခေါက်လုပ်ထားရင် ပြီးပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်နေတာ အသားကြပြီးသားကို
တခြားတစ်ခုထပ်ပြီး ဘယ်သူမှ ပြောင်းချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သို့ပေမဲ့ unicode 5.1 သုံးရင် နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီး လွယ်ကူလာဖို့ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက window မှာ unicode 5.1 font ပါပြီးသားဖြစ်လာရင် font installation ကိစ္စတွေ ခေါင်းကိုက်စရာ လိုမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Ubuntu မှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ လက်ကွက် ပါပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်။ (အသေအခြာတေ့ မကြည့်မိပါ၊ unicode 5.1 ဖြစ်တဲ့ myanmar3နဲ့ တူမယ်ထင်ပါတယ်) ကျနော်တို့ ဇော်ဂျီကို ubuntu မှာ သုံးချင်တဲ့အခါ ကိုစေတန်ရေးထားတဲ့ zawgyi keyboard driver ကို သုံးရပါတယ်။
နာမယ်ကြီး blogger တွေရယ် နာမယ်ကြီး ဆိုဒ်တွေ ဖိုရမ်တွေကစလို့ unicode 5.1 စသုံးမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အားလုံး standard တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ကျနော်တို့အတွက် အစဉ်ပြေတာပေါ့ဗျာ။
ပြောရရင်တော့ revolution တစ်ခုပါ။ zawgyi ပဲဖြစ်ဖြစ် myanmar3ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကထုတ်တယ်။ ဘယ်သူထုတ်တယ် ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဒါရိုက်ရင် ဒါပေါ်တဲ့ တခုတည်း standard ပေါ်ရောက်သွားရင် zawgyi နဲ့ ရေးထားတာလည်း ဇော်ဂျီမရှိရင် အနည်းဆုံး myanmar3မှာ ဖတ်လို့ရမယ်။ myanmar3နဲ့ရေးထားတာလည်း zawgyi နဲ့ ဖတ်လို့ရမယ်ဆိုရင် တော်တော်ကောင်းမှာပါ။
အခုက ကျနော်တို့တွေ email တို့ Gtalk တို့မှာတောင် ဇော်ဂျီနဲ့ ချက်တင်လုပ်ကြတာ များပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ.. အရိုးစွဲပြီးသားအကျင့်ကို ဖျောက်ဖို့က ဒီလိုပုံစံတူတစ်ခု (အနည်းဆုံး ကီးဘုတ်လက်ကွက် ခပ်ဆင်ဆင် တူတဲ့ပုံမျိုးဆို ကောင်းမယ်ထင်တယ်)။ နောက်ပြီး လင်းနစ်တို့ mac တို့အတွက်ကော။ unicode 5.1 သမားတွေကလည်း ငါတို့မှန်တယ်၊ ငါတို့ပုံစံပဲသုံးရမယ်ဆိုပြီး နှစ်ခုကို ညှိမယူပဲ ကွိုင်ရှာပါတယ်။ ဇော်ဂျီဘက်က ငါတို့ဟာက လူသုံးအများဆုံးဆိုပြီး ပြောင်းဖို့ညင်းပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း unicode 5.1 ကို အမြင်ကတ်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။ အမြင်ကတ်ရခြင်းရဲ့ တခြား reason တွေလည်း အများကြီးပါ။
ဇော်ဂျီဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနာဂတ်အတွက် အလားအလာရှိတဲ့ ကမာ္ဘသုံး စနစ်တစ်ခုတည်းအောက်ကို ကျနော်တို့အားလုံး ပြောင်းဖို့လိုပါပြီ။
ကိုကိုဖူးကတော့ ဖူးရောင်ကုန်တော့မှာဘဲ .. စေတနာကို မြင်ပါတယ်ဗျာ။
မတတ်နိုင်ဘူး ကိုဒီဘီရေ။ ဆေးရုံကားလည်း ပြင်သင့်ရင် ပြင်ထားရမှာပဲ။ :D
မရေးဘူးလို့ နေပေမယ့် မျက်စိရှေ့မှာ ပေါက်ကရ ပြောနေတာတွေ မြင်လို့ ဒီအတိုင်း ကြည့်မနေနိုင် တော့လို့ပါ။
စာဖတ်သူ: "ဇော်ဂျီဖောင့် ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဖက်က အားလုံးနဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့ မကြိုးစားဘဲ ငါတို့ဖောင့်ကို လူသုံးများတာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း ဘာလို့ လိုက်နာရမှာလဲ ဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုး ချိုးပါတယ်။" ဘယ်မှာဘယ်သူရေးထားတာလဲ
စာဖတ်သူ: ဇော်ဂျီကလူတွေရေးထားတာ မဖတ်ဖူးလို့ပါ
zt: ကိုရဲမြတ်သူ မြန်မာအိုင်တီပရိုမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။
zt: ကွန်မင့်တွေကို အသေအချာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
လင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ မှတ်ချက်ဖြစ်အောင် ဒီမှာ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုztက "ယူနီကုတ် အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘဲ ယူနီကုတ်လို့ နာမည် ခံထားတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဝန်မခံပါဘူး။" လို့ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီကိုယ်တိုင်က
"ဇော်ဂျီမြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်သည် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်နှင့် ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ဖိုင်တို့ ပါဝင်သော ယူနီကုဒ်စံ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကိုက်ညီသော မြန်မာစာစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ " လို့ zawgyi.net မှာ ပြောထားပါတယ်။
ကိုzt တို့လို standard ကိုလိုက်နာစေချင်တဲ့လူတွေ တိုက်တွန်းရေးသားတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝါသနာရှင်တွေ မြန်မာစာပေ အရေးအသားတွေ တခေတ်ဆန်းလာတာ ဇော်ဂျီကြောင့်လို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ ဇော်ဂျီကသာ မစခဲ့ရင် အခုလို standard တွေပြောဖို့နေနေသာသာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ font အမှောင်ခေတ်ထဲမှာပဲ ရှိဦးမှာပါပဲ။ ဇော်ဂျီကို လူမိုက်တွေလို့ပြောတာကတော့ အပြော မတတ်တဲ့လူထဲ ကိုzt ပါသွားသလိုပါပဲ။
ဇော်ဂျီမှာ အားနည်းချက်ရှိတာကိုလက်ခံပေမယ့် သာမန် ကျနော်တို့လိုလူတွေကတော့ စာရေးလို့ရ ဖတ်ရ၊ စာရေးရရင် ကျေနပ်နေတာကိုး။ အဲလိုလူတွေကို အဆင်ပြေအောင် ဇော်ဂျီကတစ်ခုခုလုပ်ပေး ဒါမှမဟုတ် ယူနီကုတ်ကို စနစ်တကျဖြစ်အောင် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်။ သိသလောက် ဇော်ဂျီကလည်း open source ပါပဲ။ လုပ်တတ်တဲ့လူတွေ ဝိုင်းပြင်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါ။
အခုဆို Google Reader မှာ ဇော်ဂျီ နဲ့ဖတ်ရင် ကျနော်ဖတ်တဲ့ ဘလော့နဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ ၉၅% လောကို ဖတ်လို့ရပါတယ်။
ဂျီတော့မှာလည်း ဇော်ဂျီနဲ့ ချက်ပါတယ်။
အီးမေးလည်း ဇော်ဂျီနဲ့ ပို့ပါတယ်။
အဲဒါတွေ အားလုံးကို လိုက်ပြောင်းဖို့နဲ့ လူအများစု အကျင့်ဖြစ်ပြီးသား ကိစ္စကို အတင်းချက်ချင်း ပြောင်းခိုင်းဖို့ကတော့ လွယ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို လူကြိုက်များ လူသုံးများဖို့ကလည်း လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရရင် အားလုံးက လက်ရှိမှာ ဇော်ဂျီက အစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်နေလို့ သုံးနေကြတာပါ။
တကယ် ပြောင်းသုံးစေချင်ရင် ဇော်ဂျီသုံးသူတွေကို မတိုက်ခိုက်ပဲ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ဇော်ဂျီရဲ့ ဘာလို့အောင်မြင်လာရတာလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး unicode 5.1 မှာ သုံးဖို့ပါ။ keyboard driver စသည်တို့ကို platform အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပြေရယူနိုင်ဖို့ ဇော်ဂျီထက်ပိုမို လွယ်ကူစေဖို့ စသဖြင့်ပါ။
ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ကမာ္ဘသုံးစံပဲဖြစ်ပါစေ လူတွေလိုက်မသုံးပါက အလကားပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
@Naing Tun Win
Re: (အနည်းဆုံး ကီးဘုတ်လက်ကွက် ခပ်ဆင်ဆင် တူတဲ့ပုံမျိုးဆို ကောင်းမယ်ထင်တယ်)"
Please download and install NHM Writer from here:
Install it, choose any language when you install. After Installation, run it, and right click on the NHM Icon in the task bar. Choose Settings and Add new Keyboard. For new Keyboard download from here:
This layout is the same as ZawGyi and support DeadKey (ZawGyi Key) and also Special Key ']' for typing not just English punctuations but also numbers and letters.
Please note this work is not yet 100% complete, therefore I would love to getalot of feedback on it. Many thanks.
စာဖတ်သူ -> ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
>>>ကိုztက "ယူနီကုတ် အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘဲ ယူနီကုတ်လို့ နာမည် ခံထားတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဝန်မခံပါဘူး။" လို့ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီကိုယ်တိုင်က
ဇော်ဂျီယူနီကုတ်စနစ် ဆိုပြီး သုံးနှုန်းထားတာကိုးက လွဲနေပါတယ်။ User ကို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေပါတယ်။ Unicode စံနှုန်းကို မလိုက်နာပဲ Unicode Codepoint သုံးထားရုံနဲ့ ယူနီကုတ်လို့ နာမည်ပေးထားတာက စမှား နေတာပါ။ ကိုရဲမြတ်သူ ပြောသလို Stable ဖြစ်တဲ့ ယူနီကုတ် စံနှုန်း ကို ထိုင်စောင့်နေတယ် ပြောပေမယ့် ဇော်ဂျီစထွက်တဲ့ အချိန်ကတည်းက ရှိနေတဲ့ ဘယ်ဘာသာစကားမှာ မဆို လိုက်နာရမယ့် ယူနီကုတ် စံနှုန်း (Unicode 4.0 Document ထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။) တွေကို လိုက်နာ မထားတာတော့ ဘာလို့လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။
>>>ဒါပေမယ့် ဝါသနာရှင်တွေ မြန်မာစာပေ အရေးအသားတွေ တခေတ်ဆန်းလာတာ ဇော်ဂျီကြောင့်လို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ ဇော်ဂျီကသာ မစခဲ့ရင် အခုလို standard တွေပြောဖို့နေနေသာသာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ font အမှောင်ခေတ်ထဲမှာပဲ ရှိဦးမှာပါပဲ။ ဇော်ဂျီကို လူမိုက်တွေလို့ပြောတာကတော့ အပြော မတတ်တဲ့လူထဲ ကိုzt ပါသွားသလိုပါပဲ။
ဇော်ဂျီဟာ မြန်မာစာတိုးတက်ရေးအတွက် တခန်း တကဏ္ဍ ပါဝင်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Alpha ကို ယူနီကုတ် အပြောင်းအလွဲမှာ နောက်ချန်မနေခဲ့ စေချင်ပဲ ဇော်ဂျီနဲ့ အတူတူ ပါလာစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် "standard က သုံးစွဲသူအတွက်လား သုံးစွဲသူက standard အတွက်လားဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။" ဆိုတာမျိုးကို ဖတ်ရတော့ ဇော်ဂျီဘက်က မပြောင်းဘဲ နေလို့ ရသ၍ ပြောင်းမယ့် အနေအထား မရှိဘူးလို့ တွေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဇော်ဂျီကို ထောက်ခံပြီး ရပ်တည်နေရင် လူမိုက်အားပေး ဖြစ်မှာ အမှန်ပါပဲ။ “ဘလော့ဂါတွေ အားလုံး သုံးနေကြတာ။ လူတိုင်းသုံးနေကြတာ” ဆိုတာမျိုးတွေ ခဏခဏ ကြားရတော့လည်း User တွေဘက်ကပါ အလိုတူအလိုပါ ဖြစ်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပါ။
ကွန်မင့်အတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောပါရစေ။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲ နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ comment ပေးသွားကြသလိုပါပဲ။ user က သုံးရအဆင်ပြေတဲ့ဟာကို သုံးနေကြတာပါ။ Zawgyi မှသုံးမယ်လို့ ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာစာ မြင်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပါဦးဆိုရင် ... Alpha.com.mm ကလင့်ဖြစ်ဖြစ် Zawgyi.net ကလင်ခ့် ဖြစ်ဖြစ် ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဘာမှမသိတဲ့ user တောင် download လုပ်ပီး install လုပ်၊ restart လုပ်လိုက်တာနဲ့ မြန်မာလိုမြင်ရတော့ ပျော်ပီး သုံးကြတာပါ။ ခုလို ရှင်းပြတာကို ကျနော်တို့လို နားလည်သူတွေက အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် တကယ် အများစုက သိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို "လူမိုက်အားပေး ... " လုပ်နေတယ်လို့ သွားပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ။ (I doubt that the half of the successful bloggers would knows about it)
ကျနော့ကိုယ်ပိုင် Blog မှာ ဘာမှမယ်မယ်ရရမရှိပေမယ့် ကျနော့ လုပ်ငန်းက လုပ်နေတဲ့ site တွေမှာ မြန်မာစာကို အကြီးအကျယ်သုံးနေရပါတယ်။ ဝင်ဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေလဲ များပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ Zawgyi နဲ့မလုပ်ပဲ ၅.၁ ကို မပြောင်းရဲသေးတာ အမှန်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် user တွေအဆင်မပြေဖြစ်ပီး ဝင်မဖတ်တော့မှာ မကြည့်တော့မှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို technically သွားရှင်းပြနေလဲ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ အခုက မှန်တာမှားတာထက် assurance ပေးနိုင်တာ လိုမျိုး၊ easy to use, easy to adopt လိုမျိုး လိုနေတယ်ထင်ပါတယ်။ awareness လဲ မရှိတာပါပါတယ်။
အခု ဇော်ဂျီနဲ့ 5.1 နဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာပဲ သိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ နားမလည်ပါဘူး။ Unicode အစစ်ကို ကောင်းမှန်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလဲ မသိပါဘူး။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲ မသိပါဘူး။
အမှန်က ကျနော်တို့ (မသဥ္ဖာ ပြောသလို) ရေနွေးအိုးထဲက ဖား ဖြစ်နေတာပါ။ ကြာရင် ဘာမှမသိလိုက်ပဲ ကျက်သွားမှာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ... where is the solution? ပေါ့
စာတွေရော ကောမန့်တွေရော သေချာဖတ်သွားပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Unicode standard ကိုလိုက်နာတဲ့ Zawgyi ပေါ်လာခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးက စွဲနေကြပြီဗျ။ ဖားဥပမာလိုမျိုးပေါ့လေ။
ကိုZT အနေနဲ့ Zaw Gyi to Unicode 5.1 ကို အမြန်လေး ဆက်ရေးပေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
ခက်တော့ နေပါပြီ...သိပ် စိတ်မပူပါနဲ့ Microsoft ဘာညာ အစရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကြီးတွေက မြန်မာ ဘာသာကိုပဲ စလက်ခံပါစေအုန်း။ အဲဒီအချိန်ကျ ခင်ဗျားတို့တွေက တားနေလဲ ဇော်ဂျီ သုံးတဲ့လူတွေက မပြောင်း မနေ ပြောင်းသုံးမှာပါ။ ဘယ့်နဲ့ ခုတော့ မဆိုင်ရာ ဂလိုင် ခေါက်နေသလိုပဲ။ ကိုယ့် ဟာကိုယ်တော့ အသုံးပြုရ လွယ်ကူအောင် မကြိုးစားပဲ ဘယ်နဲ့ ဇော်ဂျီကို လူမိုက် အော်နေရ တာတုန်း။ အခုဟာက ရှက်စရာတောင် ကောင်းနေတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့က ရေနွေးအိုးထဲက ဖားလဲ မဟုတ်ရပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေက အချိန်တန်ရင် သူ့ဟာသူ ပြောင်းသုံးသွားတာပဲ။ microsoft window တွေကို ဘယ်လောက်လေးတယ်ပြောပြော အခုထိ တွင် ကျယ်နေတာပါပဲ။ သိပ်လဲ ကလေးမဆန်စမ်းပါနဲ့။ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ တခြားလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးလား လို့ အမေးခံရမှ ရှက်ဖို့ ကောင်းနေပါအုန်းမယ်။
The most important is user friendly. The solution will appear.
Anonymous Above-> အဲဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိလို့ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရေးတာပါ။ ဇော်ဂျီသုံးပြီး ပြောင်းချင်တဲ့ အချိန် ထပြောင်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဆိုသူများကို ဘာပြသနာ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြတာပါ။
Data ဆိုတာ Corrupt မဖြစ်မချင်းတော့ ပြောင်းရတာ လွယ်ပါတယ်။ Corrupt ဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့ ရေးထားသမျှ ပလုံတောင် အသံမကြားပဲ ပျောက်သွားမှာပါ။ ဇော်ဂျီ နဲ့ သိမ်းချင်သလို သိမ်းထားတဲ့စာကို Database Auto Conversion လုပ်တဲ့အချိန် Unicode အနေနဲ့ Normalize လုပ်ပြီး သိမ်းလိုက်လို့ Corrupt ဖြစ်သွားခဲ့ရင် အလွယ်တကူ Recover လုပ်လို့ ရပါတယ် ဆိုပြီး အာမခံနိုင်တဲ့သူများ ရှိရင် သိပါရစေ။
Anonymous at 9:27PM-> ဇော်ဂျီကို လူမိုက်မပြောပါဘူး။ User ကို Unicode မဟုတ်ပဲ Unicode နာမည်တပ်ပြီး လိမ်တာကို သိသိကြီးနဲ့ ထောက်ခံရင်တော့ လူမိုက်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့။
Microsoft ကလက်ခံမှ မြန်မာစာ ပြောင်းရမှာလား။ M$ နဲ့ မဆိုင်တဲ့ တခြားလုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်လေ။ I-Phone တို့ Blackberry တို့လို Handheld တွေပေါ်မှာ မြန်မာစာသုံးလို့ ရအောင် လုပ်ရဦးမယ်။ OCR, OCV လို ဟာမျိုးတွေ လုပ်ရဦးမယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ Unicode Standard ကြီး ရှိနေရဲ့သားနဲ့ ဇော်ဂျီတစ်ပိုင်း ယူနီကုတ်တစ်ပိုင်း၊ ဖားတစ်ပိုင်း ငါးတစ်ပိုင်း လုပ်ရမှာလား။ အစကတည်းက မှန်အောင် လုပ်လို့ ရရဲ့သားနဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ အရင်လုပ် နောက်မှ Unicode ပြန်ပြောင်းမယ် ဆိုတာမျိုးက အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး။ သိသိကြီးနဲ့ လုပ်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေ အလကား ဖြုန်းသလိုပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။
ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇော်ဂျီကနေ မြန်မာယူနီကုတ် ပြောင်းဖို့ Solution ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အသင့် ရှိပါတယ်။ သိပ်မကြာ တော့တဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုမှာ ဖြန့်ဝေပေး သွားမှာပါ။ Open Source အနေနဲ့ ဖြန့်ချီပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Blogspot ပေါ်က ဘလော့ခ် တစ်ခုကို နာရီပိုင်း မိနစ်ပိုင်း အတွင်း ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုတ် အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ မကြာခင် အားလုံးဆီကို အရောက် ဖြန့်ချီပေးသွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
The problem is thatalot of standard supporters like to givealabel to Zawgyi users. Such labels include a) Ignorant, b) Frogs inapot? c) Minority Insensitive etc.
The real problem is that these people are label less. We should never give them labels. Just keep the spirit high and keep working on what needs to be done. Ask them their wish list; what would they like to see?
There is however another problem to this state of disconnects. Bloggers. Mostly proto bloggers are highly opinionated, which is their nature and that is fine. But sometimes they are highly opinionated toafault. This is not fine. Voices which express these concerns gets crushed heavily. Such debates need to go on since the number of advices for ZawGyi far out weight the numbers for Unicode, and public articles taking jibes at Unicode first appeared by early adopters of ZawGyi. [Asaside note I find thatalarge number blog authors actually useastyle of prose that borders between bluntness and rudeness. Yet when I see these people talking ‘live’ than they useadifferent form of speech. This seems really weird to me.]
FUD generators have been working far too long unchecked. Hence I welcome more pieces on this. However do not give labels to users, just state the facts and keep it as factual as possible. And understand that the real reason people have not switched is inertia. Nothing else. But don't stop writing. Continue, and talk about why you are doing what you are doing and why it makes more sense to you without attacking any technology or person. This is best done by ahem ahem… the "Other Group". Sorry that was justajoke, could not help myself. ;)
You'll notice thatacouple of comments cited the lack of ZawGyi layout as one of the primary reasons of not giving Unicodeashot. Now whenacomment appears givingalink to this particular issue raised, they stop talking about it. Which proves my point that the real reason is not lack of solutions for migration but just inertia. But we should never stop releasing solutions for all users. More will come. Keep the spirit going.
ကိုဇေယျာပြောတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတော့ ကိုဇေယျာ ဆိုလိုတာကို နားလည်ပါတယ်။
ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်တွေက စာဖတ်သူမလာမှာ စိုးရိမ်မှာပေါ့လေ။
ပေးကြပါဦး။ ဇော်ဂျီ ပဲကောာင်းကောင်း unicode 5.1 ဒါမှမဟုတ်ကောင်းချင်တာပဲကောင်းပါ အဓိကကတော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်
=ယူနီကုတ်ကိုပြောင်းသင့်မှန်းသိပါတယ် ဒါပေမယ့်ပြောင်းဖို ့ဆိုတာကအခက်အခဲတွေရှိတယ်လေဗျာ
ဇော်ဂျီကတော့သုံးတာလဲကြာပြီ ဆော့ဝဲကအစအလွယ်တကူရှာလို ့ရတယ်လေ
ယူနီကုတ်ကကျတော့အစတုန်းက ဇော်ဂျီကစလုပ်တုန်းကဘာလို ့မလုပ်ကြပဲနဲ ့အခုမှထအော်ရတာတုန်း အခုထက်ထိကို ယူနီကုတ်နဲ ့ရေးတဲ့ဆော့ဝဲဘယ်မှာရှာရမှန်းမသိဘူးဗျာ အဲဒီလိုလျောက်အော်မယ့်အစား အသုံးများလာအောင် အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြ လှူံ ့ဆော်တာမျိုးကပိုပြီးထိရောက်ပါတယ် ဒီပို ့မှာတောင်မှ ယူနီကုတ်ဆော့ဝဲဘယ်မှာ ရှိလဲ ရနိုင်လဲမရေးထားတာကိုတွေ ့ရပါတယ် ကောင်းတယ်ဆိုရင် လွယ်လွယ်ရနိုင်အောင်လုပ်ထားပါအုံး
ယူနီကုတ်စံနှုန်းကို လိုက်နာတဲ့ ဖောင့်၊ ကီးဘုတ်တွေ တစုတစည်းတည်း တွေ့ချင်ရင် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကနေ တဆင့် သွားနိုင်ပါတယ်။ http://my.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Font#Unicode_5.1_Myanmar.2FBurmese_fonts
နောက်ပို့စ်တွေ မှပဲ အသေးစိတ် ရေးပါတော့မယ်။
ကိုzt ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ် ။ ဇော်ဂျီကြောင့် ဘလော့ဂါလောက တိုးတက်လာတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဘုရားပြီးရင်တော့ ငြမ်းဖျက်ရမှာပါပဲ။ ဘလော့တွေကို unicode 5.1 နဲ့ပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင် unicode 5.1 ထည့်ပြီး ဖတ်မှာပါပဲ။ လက်ကွက်အခက်အခဲ ဆိုတာကလည်း အချိန်တစ်လလောက်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့်အသေးအမွှားပါ။ ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုzt။
အမှန်က ဇော်ဂျီ ကီးကွက် အတိုင်းလုပ်ရမှာ..
ကျနော်လို သမားရိုးကျ လူတွေ အတွက်တော့ အမြဲသုံးလာခဲ့ပီးတဲံ လက်ကွက်ကနေ သွေဖယ်ပီး အသစ်တခုကို ထပ်မမှတ်ချင်တော့တာ အမှန်ပဲ။ မဖြစ်ဘူးဆိုလဲ မသုံးယုံပဲ ရှိတော့ပါတယ်။
အစတည်းက မှတ်ညဏ်ထဲမှာ စွဲပီးသာ အရာ ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့က အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ ဒါကို ဇော်ဂျီသုံးလို့ လူမိုက်အားပေးဆိုလဲ..ဟုတ်ကဲ့ လူမိုက်ပါပဲ..။ ဇော်ဂျီသုံးတာကို လူမိုက်လို့ ပြောခဲ့
ရင် အသစ်ထွင်တဲ့ သူတွေကိုလည်း လူမိုက်လို့ သုံးစွဲပါရစေ..။ ဘာဖြစ်လို့ ထပ်တူမကျတဲ့ လက်ကွက်ကို မသုံးပဲ ပြောင်းထားရပါသလဲ..။ ဘာဖြစ်လို့ ညှိနိုင်းပီး ကောင်းမွန်တိုးတက်အောင် မလုပ်ပဲ သတ်သတ်စီ တီထွင်ခဲ့ရပါသလဲ..
ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့ အရာကနေ သွေဖယ်ပီး မသုံးချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ လွပ်လပ်စွာ ခွဲထွက်သွားတဲ့ ဘလော့တွေကို တခုမှ ပြန်လိုက်မဖတ်တော့ပါဘူး။ တချို့ အရေးအသား ကောင်းပေမဲ့ ကျနော် ဖတ်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး။ ဒါ ကျနော့်အမြင်ပါ..။
အများက အသားကျနေတဲ့ အရာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကို အခုလိုမျိုး လူမိုက်အားပေး လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ရိုင်းပျတဲ့ စွပ်စွဲချက်တခုကတော့ ကျနော်တို့ လို ရွတ်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက် ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် လဲ လူမိုက်ထဲက တယောက်ဖြစ်သလို အားပေးနေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ စံအဖြစ် ကြိုးစားတာကိုလဲ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ တခုရှိတယ်.. အဲလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ ကျန်တဲ့ ပညာရပ်တွေ ကျနော် မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ကွက်ကတော့ တူကို တူရမှာပါပဲ။ ဘယ်မျ ဝေးဝေး သွားရှာစရာ မလိုပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လက်ကွက်တွေ ကိုပဲ ကြည့်ပါ။ အားလုံးက လက်ကွက် တူတူပါပဲ..။ သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲ... သူတို့လို ဖြစ်အောင် မြန်မာတွေကရော မလုပ်နိုင်ကြဘူးလားးး
အခုတော့ တခါလာ တမျိုးရိုက်စနစ်နဲ့ ချီတက်နေကြရတာ.. တချု့ ဖိုရမ်တွေက winkalw တချို့က ဇော်ဂျီ..တချို့က....
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် က အဲလို သိပ်ပီး ရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့ ဖိုရမ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ အကျိုးရှိပစေ.. ဖွန့် အခက်အခဲကြောင့် ကျနော် မဖတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ တခါတလေမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရတာလဲ အဆင်မပြေလှဘူးကို။
ဒါက သမားရိုးကျ ကျနော့်အမြင်ပါ။
ဈေးကွက်တခုမှာ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း သုံးစွဲသူ မရှိရင် အဲဒီဈေးကွက် ပျက်ပါတယ်။
Myat Noe-> ဇော်ဂျီလက်ကွက်နဲ့ Unicode Output ကီးဘုတ် အကြောင်းကို အပေါ်က ကွန်မန့်မှာ ကိုRavi ရေးခဲ့ပါတယ်။ Download လုပ်လို့ ရနိုင်မယ့် နေရာပါ ညွှန်ထားပေးပါတယ်။
လက်ကွက်ကတော့ တူကို တူရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျွန်တော် လက်မခံပါဘူး။ Standard အတိုင်း သွားမယ်ဆိုရင် Standard ကို အပြည့်အဝ လိုက်နာတာနဲ့ မလိုက်နာဘူး ဆိုတဲ့ နှစ်မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ကြားမှာ ခွထိုင်လို့ မရပါဘူး။ တစ်ဝက်တစ်ပျက် လိုက်နာတယ် ဆိုတာ စံနှုန်းမညီဘူး လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် လို့ရပါတယ်။ (ISO-14000 ကို တစ်ဝက်တပျက် လိုက်နာလို့ ISO-7000 ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ :P)
ယခုလက်ရှိ ယူနီကုတ် လက်ကွက်က ယူနီကုတ် စံနှုန်းအတိုင်း လုပ်ထားတဲ့ လက်ကွက်ပါ။ ဇော်ဂျီ ဝင်းအင်းဝ လက်ကွက်တွေကတော့ အရင်တုန်းက မြန်မာ လက်နှိပ်စက်တွေ ပေါ် အခြေခံထားတဲ့ လက်ကွက်တွေပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ မြန်မာစာ မတူရတဲ့ အကြောင်းက အင်္ဂလိပ်စာမှာ ပါဌ်ဆင့် မရှိပါဘူး။ အသတ်တွေ ဟထိုးတွေ ရရစ်တွေ မရှိပါဘူး။ Alphabet ပဲ ရှိတဲ့အတွက် လက်နှိပ်စက် နဲ့ ကွန်ပြူတာ လက်ကွက် ပုံစံအတူတူ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ မြန်မာစာမှာတော့ ရရစ်တွေ ဟထိုးတွေ ပါဌ်ဆင့်တွေ ပါတဲ့အတွက် ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူတွေ အတွက် ပိုလွယ်သွားအောင် လက်နှိပ်စက်က နေခွဲထွက်ပြီး ကွန်ပြူတာ အတွက် စံနှုန်းညီတဲ့ ယူနီကုတ် လက်ကွက် အသစ် ထွင်ထားတယ် လို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ ဇော်ဂျီ ရိုက်နေကျသူ ယူနီကုတ် ကီးဘုတ် ပြောင်းသုံးဖို့ ၁ ပတ် မကြာပါဘူး။ ၁ ပတ်ကြာလို့ ယူနီကုတ် ကီးဘုတ် နဲ့ အသားကျသွားခဲ့ရင် ဇော်ဂျီမှာ ရိုက်နေကျ Speed ထက် ပိုမြန်အောင် ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မပြောင်းချင်ဘူး ဆိုသူများတော့ ကို Ravi ပြောတဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက် နဲ့ ယူနီကုတ် Output ကို သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါကတော့ User ရဲ့ preference ပါပဲ။
စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာများ ရှိရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ဖြေရှင်းပါ့မယ်။
ကျွန်တော်က ယူနီကုတ်အစစ် ကို သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်စတော့ မြန်မာ ၃ နဲ့ ရေးပါတယ်။ လက်ကွက်လဲ ပိုလွယ်ပါတယ်။ ရရစ် ၁ မျိုးထဲ ဆိုတာမျိုးက တော်တော် သဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ကိုသင်ကာတို့ဆီက လိပ်ပြာကွန်ဗာတာ ကူးပြီးတင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖတ်တဲ့သူ အများစုက ကွန်မန့်ရေးဖို့ ခက်တယ်၊ စသည်ဖြင့် ပြောကြပါတယ်။ ဒါတောင်သူတို့လည်း ဘလော့ဂ်ကာတွေပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ဇော်ဂျီ ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်။ (တကယ်က ကျွန်တော် ဇော်ဂျီ မရိုက်တတ်ပါ၊ ဝင်းအင်းဝ နဲ့ ရိုက်ပြီး ပြောင်းယူရတာပါ။)
ယူနီကုတ် ရေရှည်ကောင်းမှန်း သိပေမယ့် - ခုလောလောဆယ်တော့ ဖတ်တဲ့သူတွေ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေနေရင် တော်ပြီလို့ပဲ သဘောထားပါတယ်။
(ISO-14001 ကို တစ်ဝက်တပျက် လိုက်နာလို့ ISO-7000.5 ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ :P)
(ISO-14001 ကို တစ်ဝက်တပျက် လိုက်နာလို့ ISO-7000.5 ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ) \_m/
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ပို့စ်တွေကိုရော ကွန့်မန့်တွေကိုရောဖတ်ပြီးတဲ့အခါ တခုပြောချင်လာပါတယ်။
တကယ်စံနှုန်းမြန်မာဖောင့်တခုထွက်ပေါ်လာဖို့ရာမှာ လက်ရှိအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။
unicode 5.1 ဘက်ကလည်း အသုံးပြုသူတွေအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးစေချင်သလို
အသုံးပြုသူတွေဘက်ကလည်း အသစ်ကိုလက်ခံဖို့ခဲယဉ်းခြင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲရမှာကိုကြောက်နေတာနဲ့ပဲ အလွယ်ဟာကိုလိုက်မလား
နောက်ခါလာ နောက်ခါဈေးလိုမျိုးလုပ်နေရင်တော့ ဘယ်တော့မှ standard ဆိုတာတခုကိုရလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Windows is more vulnerable to security threats than Linux.
Windows is costlier than Linux.
Windows is more resource-hungry than Linux.
Yet Windows has nearly 90% of market share in PC.
There must beareason, right? I think same principle applied here.
Zawgyi may not follow the standard but it is very popular among users.
You cannot just blame users for using Zawgyi font which is very easy to install for them.
You cannot simply label “stupid” to the users who are using Zawgyi because Zawgyi is not following the standard.
I think the background of Zawgyi vs. Unicode fonts is more politics than the standard you said. You can see who are behind Myanmar3 font in http://www.myanmarnlp.net.mm/aboutus.htm. You can see there is only one developer withateam of big IT guys. They spent so much of tax-payers money but they cannot produceasimple font. When the font is ready, Zawgyi has already dominated the market. So they have to do something like talking bad about Zawgyi.
Now we knowabit of advantages of using Unicode compliment fonts. How about disadvantage of using the fonts that mentioned?
အင်းး အခုလို မြန်မာစာ ကီးဘုတ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ် နှိုင်းယှဉ် ရှင်းလိုက်တော့လည်း သဘောပေါက်သွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့..အားလုံး ပြောင်းမှ ကိုယ်လည်း လိုက်ပြောင်းလို့ရမှာတော့ အသေအချာပဲလေ..။
အာအိုင်တီကို ဝီုင်အိုင်တီ ပြောင်းသလိုပေါ့..။
ခက်တာက အဲဒီတုန်းကလည်း ကျနော်က အခုထက်ထိ အာအိုင်တီ လို့ပဲ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့် ဦးလေး တွေက အဲဒီကျောင်းဆင်းပီး ဝိုင်အိုင်တီ လို့ ခေါ်လို့ ကျနော်နဲ့ ရန်ဖြစ်ရသေးတယ်..။
ကျနော့်အထင် ပြောင်းဖို့ ကတော့ အတော်ခက်မယ်ထင်ပါတယ်။ လွပ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးညှိုနိုင်းကြပါ။ အများက ပြောင်းဆို ကိုယ်လည်း အများနည်းတူ ပြောင်းရမှာပေါ့..။
ကောင်းမယ်ထင်ရင် ဆက်ကြိုးစားပါ။ တကယ်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဖြစ်လာရင် လူသုံးများ လာပါလိမ့်မယ်။ Matlab ကို နှေးတယ်။ ဈေးကြီးတယ် စသဖြင့် ပြောကြပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ ဈေးကွက်မှာလဲ မသုံးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ researcher တွေက ဆက်သုံးနေဆဲပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ Matlab က သုံးရ လွယ်တာကို။ ဒါကို Matlab သုံးတဲ့ Researcher လူမိုက်လို့ ပြောရင်တော့ ပြောတဲ့လူက နဲနဲ ဘောင်ကျော်တာပေါ့။
အခုလဲ အဲဒီ သဘောပဲလို့ မြင်တယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ လူတွေ အသားကျနေတယ်။ မြန်မာယူနီကုဒ်က ခုထိ မတွင် ကျယ်သေးဘူး။ မသုံးတဲ့ လူတွေကို အပြစ်တင်နေမဲ့ အစား ယူနီကုဒ်ကို ဘယ်လို တွင်ကျယ်အောင် လုပ်မလဲ။ ဇော်ဂျီနဲ့ ဘယ်လို ညှိယူမလဲ။ ဒီလို မဖြစ်သင့်ဘူးလား။ ပြောတာတော့ အဖြေ အသင့် ဖြစ်ပြီးသားတဲ့။ ဒါဆိုလဲ အဲဒီ အဖြေကို လူတွေကြားထဲ တွင်ကျယ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ အခုလိုနည်းနဲ့ လှုံ့ဆော်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုလူကတော့ နောက်ဆုံး အချိန်အထိ ဇော်ဂျီကုို သုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုလို ဝင်ပြောရတာ ဇော်ဂျီဘက်ကို မသိလို့၊ သိလို့ ဇော်ဂျီနဲ့ ဘလော့ဂ်နေလို့ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာ ဘလော့ဂ်လောက ကလဲ မဟုတ်ပါ။ မနာလို စိတ်နဲ့ ပြောနေတယ်လို့ ခံစားရလို့ မြန်မာတစ်ဦးအနေနဲ့ စိတ်ပျက်မိလို့ ဝင်ပြောမိတာပါ။ လက်ရှိ စင်္ကာပူက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ ဌာနမှူးဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ ဆရာတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကို သူ့လက်အောက်မှာ ထားရတာ မလွယ်ဘူးတဲ့။ ပညာမရတဲ့ နေရာမှာ ထားရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ပညာနဲနဲ ယှဉ်ရမဲ့ နေရာမှာ ထားရင် အချင်းချင်း သတ်နေတာနဲ့ အချိန်ကုန်တာပဲတဲ့။ အဲလို ဖြစ်နေပါအုန်းမယ်။
အဖြေတွေ အဆင်သင့် ရှိနေပြီးသားဆိုရင်လဲ ဒီနည်းနဲ့ တော့ မလှုံ့ဆော်ပါနဲ့။ ရိုးရိုးသားသားပေါ့။ ဆိုပါတော့ ကို zt ပြောသလိုပဲ Iphone တစ်ခုမှာ မြန်မာ ဖွင့် သုံးလို့ ရအောင်သာ ကြိုးစားပြလိုက်စမ်းပါ။ ကျွနု်ပ်တို့တွေကို ယူနီကုဒ် ရောင်းစားရင်တောင် ကျွန်ုပ်တို့က ဝယ်ရ အုန်းမှာပါ။ အခုတော့ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ရန်ဖြစ်ပြနေတယ်။ အခုတောင် commet တွေက တော်တော်များနေပါပြီ။ ရန်ဖြစ်တာပဲ ပိုပါတယ်။ အလုပ် ထက် လက်တွေ့ သာ လုပ်လိုက်စမ်းပါ။ ရောင်းစားလို့ ရပါတယ်။
ယူနီကုတ်ကို စီးပွားဖြစ် လုပ်ဖို့ ကျွန်တော့်မှာ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။ Nokia ပေါ်မှာတော့ Unicode 5.1 နဲ့ သုံးလို့ရအောင် Solveware တို့ MyMyanmar တို့က လုပ်ထားကြပါတယ်။ I-phone လည်း သူတို့တွေ လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ :P
သူတို့က Unicode မဟုတ်တာကို ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြောရင် သူတို့မှာ ဘာအကျိုးရှိနိုင်သလဲ ဆိုတာ တွေးနေမိပါတယ်။
ဟိုက်... ပို့ကို နောက်ပြန်ဖတ်သလို ဖြစ်လို့ ရှေ့မှာ ပြောနေကြတာကို မသိလိုက် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနှစ်ခုနာမည် တတ်လိုက်တာနဲ့ တယ်လဲပွဲကောင်းပါလားဗျ ဟီးဟီး။
Google has no rights to modify user's blog content.
Instead, if you ask google to do that, Google will just tell you to do, export and import blog xml.
My imagination and understanding might be wrong for "Google". But I am worry for any scenario which might cause to corrupt our data those are not properly normalized and we won't be able to recover it back.( or very hard time to recover it back.)
>> But I am worry for any scenario which might cause to corrupt our data those are not properly normalized and we won't be able to recover it back.( or very hard time to recover it back.)
Ok, but personally I think this will not happen, unless the one who did converting don't know what he is doing.
its like copy and pasting 'rm -f /',
its not the commands fault or system faults, itsapersonal issue.
and don't worry about Google's Search Engine Database.
Once the web site is converted to Unicode 5.1, it will be automatically recrawl on next timing.
ဒီမှာ ပို့စ်တင်တယ်ဆိုတာ မသိပါ။ မေးလ်နဲ့ရောက်လာတော့ မေးလ်နဲ့ပဲ ပြန် ကော်မန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာ ထပ်မရေးတော့ပါဘူး။
စကားမစပ် ဝီကီပထမစာမျက်နှာမှာ ပြင်သင့်တာတွေ စာရင်းတင်ပေးထားပါတယ်။ ပြောရေးဆိုရာမှာပါ။ တချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဆွေးနွေးကြသူတချို့အတွက် လင့်ခ်လေးတွေ ထားခဲ့ပါတယ်။
Myanmar Unicode Foundation http://myanmarunicode.org/
Some of my posts about Unicode
>>> ရေနွေးအိုးထဲက ဖား ဖြစ်နေတာပါ။ ကြာရင် ဘာမှမသိလိုက်ပဲ ကျက်သွားမှာ သိပါတယ်။
The 'Truth' is, အဲဒီ ရေနွေးအိုး က အဲလောက် မပူပါဘူး။ နွေးတယ်ဆိုရုံပဲရှိတယ်။ မီးလဲ ထပ်ထဲ့ဖို့ မရှိဘူး။ :P
ဒါပေမယ့် အချို့ အဲဒီအိုးထဲက သူတွေက အရမ်းပူ သယောင်ဆောင် နေကြတာပါပဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူများများ အိုးထဲဆွဲချလို့ ရရင် ရေလယ်ဗယ်တက်လာပြီး
ဥပမာ ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပရောဂျက်တွေပါတွေပေါ့။
Its not bad things but I don't like to hear rumors.
# I am agree with Ko Law Shay
- ပြောင်းချင်တဲ့အချိန် ထပြောင်းလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ပြောင်းရမှာပါပဲ။ ဇော်ဂျီ ကျွန်တော့် တသက်ခံလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ :D
နောက်ကျလေ ပြောင်းရမယ့်ဟာ ပိုများလေ အလုပ်ပိုရှုပ်လေ ပါပဲ။ Doing right thing at first time လုပ်ကြမယ့်အစား ဘာလို့ နှစ်ခါ အလုပ်ရှုပ်ခံကြမလဲ။
User တွေ ရွေးချယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ မသိလို့သာ မသုံးပဲ နေကြပါတယ်။ အားလုံးဟာ အရိုးစွဲ သမားတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အခု တွေ့ရတာတော့ User တွေ ကျွန်တော် မှန်းထားတာထက်ကို ပိုပြီး စိတ်အား ထက်သန်ကြပါတယ်။
ခုနစကားကို နည်းနည်းပြန်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ Sensitive ဖြစ်တဲ့သူများအတွက်ပါ။
ဇော်ဂျီသာ Standard နောက်ကို မလိုက်ပဲ ဒီအတိုင်း ဆက်ပြီး ခေါင်းမာ နေမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့် တသက်ခံမယ် မထင်ပါဘူး ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုလောရှည်တို့ ကိုစိုးမင်းတို့ပြောသလို ပြောင်းချင်တဲ့အချိန်ပြောင်းလို့ရတယ် ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ အကိုပြောသလို အကိုမှာ နည်းလမ်းရှိတယ်ဆိုရင်လဲ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ အကို့ဘလော့လေးကို 5.1(M3) ပြောင်းပြလိုက်ပါ။ ကြည့်ရတာ အဲလိုမလုပ်ခင် အကို့ reader တွေကို M3 install လုပ်နည်းသင်ပေးရအုံးမယ်နဲ့တူပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဘယ်အချိန်ပြောင်းပြောင်းရပါတယ် ဆိုတာလဲ ဝကွက်မှန်ပါတယ်။ ကိုဇော်သက်ရဲ့ ဇော်ဂျီ ပြောင်းရမယ်ဆိုတာလဲ ဝကွက်မှန်ပါတယ်။
ပြသနာတိုင်းတွင် အဖြေရှိပါ၏ :P
ကျွန်တော် စမ်းပြီးသွားပါပြီ။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လည်း ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ အသင့်ရှိပါတယ်။ (ကျွန်တော် ရေးတာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ :D ) မကြာခင် အားလုံးဆီကို အရောက်ပို့ပေးပါမယ်။ Installer Ready မဖြစ်သေးလို့ ခဏ ဆိုင်းထားတာပါ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ခ် တစ်ခုလုံးကို ၁၅ မိနစ်အတွင်း ယူနီကုတ် ၅.၁ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ Export XML နဲ့ Blog ကို Export လုပ်၊ Standalone Converter ပေါ်မှာ XML File ကို Unicode 5.1 ပြောင်း၊ Import XML နဲ့ ပြန် Import ပြန်လုပ်။ ဒီ ၃ခု ပဲ လုပ်ရပါတယ်။ ၁၅ မိနစ် အတွင်း ပြီးပါတယ်။ ပြီးရင် CSS မှာ Unicode 5.1 Font နာမည်တွေ လိုက်ပြောင်း ရုံပါပဲ။
ဒါနဲ့ တစ်ခါတည်း ကြုံလို့ ပြောရရင် မြန်မာ၃ Installer အသစ်မှာ လက်ကွက်၊ ရိုက်နည်း၊ ကီးဘုတ် အားလုံး တစုတဝေးတည်း ပါပါတယ်။ ပိုပြီးလွယ်သွားအောင် Step by Step Installation Guide နဲ့ Quick Start Guide ရေးနေပါတယ်။
Cheers Ko ZT
>> ဇော်ဂျီသာ Standard နောက်ကို မလိုက်ပဲ
It will be real data corrupt with same font name.
ဟုတ်ပါတယ် ... ကို ဇက်တီပြောသွားသလိုပဲ ပြောင်းရတာက ပြဿနာ မရှိပါဘူး... ဒါပေမယ့် ကိုယ်တယောက်တည်း ပြောင်းနေလို့မပြီးသေးပါဘူး ... MM3 နဲ့ Zawgyi နှစ်ခုနဲ့တင် စာလုံးတွေ ရောနေလို့ မနည်းပြင်ထားရတယ်... ကျွန်တော်တို့ကတော့ Developer တွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် MM UNICODE တွေ ဘယ်လောက်ထိ တာဝေးပြေးနိုင်မလဲ ပဲ ကြည့်ယုံပဲပေါ့ ... လုပ်ကြပါ ... ကောင်းပါတယ် ... UNICODE ရှိတော့ တပန်းသာတာပေါ့ ... :P
အခု စာတမ်းငယ် အသစ်တစ်ပုဒ် ထပ်ရေးနေပါတယ်။
အဲဒီ စာတမ်းရဲ့ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ....
ပြောင်းပါက ပြောင်းတာ သိပ်ကြာခဲ့ရင် hit count ကျခြင်း၊ အဆက်အသွယ်မရခြင်း၊ တယောက်နှင့် တယောက် ပြောဆိုမရခြင်း စသော user များ မလိုချင်ဆုံး ပြဿနာများ ကြာမည်။
ပြောင်းတာ မြန်နိုင်သမျှ မြန်ရမည်။
ထို့အတွက် နည်းပညာဘက်က ဘာတွေလိုမည်၊ ပြောင်းမဲ့လူတွေဘက်က ဘာတွေလိုမည်။ ပြောင်းအောင် agent of change လုပ်မဲ့လူတွေက ဘာတွေလုပ်သင့်သည်ဆိုတာကို IS methology တွေနဲ့ ရေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
http://opera.lawshay.com မှာ တင်ပါ့မယ်။
Software အားပြုပြီး user တွေ သန်တဲ့ keyboard layout (ဥပမာ ရရစ်တွေ အများကြီး၊ သဝေထိုးနဲ့ ရရစ်ကို ဗျည်းမလာခင် စရေးတဲ့ layout) နဲ့ unicode input လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ ထပ်ရေးမဲ့ စာတမ်းရဲ့ theme မှာ အဲဒီအပိုင်းက ပထမပိုင်းပါ။
ဒုတိယအပိုင်းကတော့ user တွေသန်တဲ့ keyboard ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ပြောင်းစေမလဲဆိုတဲ့ လူမှုရေး ပြဿနာကို အဖြေရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်များတဲ့ Knowledge Management Community (blog တွေဟာ knowledge management theme လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ central control မရှိတဲ့ KM စနစ်တခု)မှာ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အတွက်က ထင်တာထက်ပိုခက်ပါတယ်။ အဲဒါအတွက် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ကြားက သီ၀ရီတွေ ကျွန်တော် သွားဖတ်ကြည့်နေပါတယ်။
ဇော်ဂျီသုံးလို့ လူမိုက်ဖြစ်တယ် ပြောရအောင် 5.1 ကကော ဘယ်လောက်များတွင်ကျယ်နေပါသလဲ..ခင်ဗျာ... လူတိုင်း 5.1 ကိုသိတယ် ထင်ပါသလား ခင်ဗျာ... နောက်ပြီး ဇော်ဂျီသုံးသည်ဖြစ်စော 5.1 သုံးသည်ဖြစ်စေ အရေးကြီးတာက Visitor တွေ မြင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်... နောက်ပြီး အဆင်ပြေမှု့လဲ လိုပါသေးတယ်... ကမ္ဘာပေါ်မှာ UNICODE တွေ အများကြီးရှိပါတယ်... UNICODE စံချိန်နဲ့ညီရင် ရပြီပဲ... ပုရပိုက်တို့ ပိတောက်တို့ဆိုတာလည်း အရင်ကတည်းက ရှိပြီးသားတွေပါ... အခုမှ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး... ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် User တွေ မသုံးကြသလဲ ... စဉ်းစားရပါ့မယ်... အခုမှ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက Unicode လုပ်မယ်ဆိုပီး ထလုပ်တာပါ... ပိတောက်တို့ ပုရပိုက်တို့ ဆိုတာလည်း ကောင်းပါတယ်... အဲဒီလိုပဲ ဇော်ဂျီဟာလည်း Non-ISO မဟုတ်သော်ငြားလည်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ အဆင်ပြေနေတာပဲ... အဲဒါကို ဇော်ဂျီသုံးလို့သာ လူမိုက်အားပေးဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်းရောင်းကောင်းဖို့အတွက် သူများကို အပုတ်ချပြီးမှ ဆိုရင် မတရားတော့ပါဘူး... တကယ်လို့ ကိုယ့်ပစ္စည်းကောင်းတယ် ဆိုရင် ကောင်းတယ်ပဲကြော်ငြာပါ... သူများဟာကတော့ မကောင်းဘူး ငါ့ဟာကသာ ကောင်းတယ် အော်နေတာကတော့ တဖက်သတ်ဆန်လွန်းပါတယ်... USerဆိုတာကကောင်းတယ်ထင်တဲ့ဘက်လိုက်မှာပဲ...တိုက်ခိုက်နေစရာမလိုဘူး လို့ထင်ပါတယ်...
>>>> သူများဟာကတော့ မကောင်းဘူး ငါ့ဟာကသာ ကောင်းတယ် အော်နေတာကတော့ တဖက်သတ်ဆန်လွန်းပါတယ်... USerဆိုတာကကောင်းတယ်ထင်တဲ့ဘက်လိုက်မှာပဲ...တိုက်ခိုက်နေစရာမလိုဘူး လို့ထင်ပါတယ်...
:P Right, Thats the Truth
>>> ဇော်ဂျီသုံးလို့ လူမိုက်ဖြစ်တယ်
ရေးတဲ့သူ သူ့ကိုယ်သူ ပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ :P j/k
အိမ်း။ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းလည်း မဟုတ်ရပါဘူး။ :P
အမှန်တရားက တခါတလေ အတည့်အတိုင်းပြောရင်း နားခါးတယ်ဗျ။ :D
နားခါးတာတော့ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်... ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပျင်းလို့ ဘလော့ဂ်တွေ လည်ရင်းနဲ့ တွေ့လို့ ဝင်လာပြီး ပြောတာပါ... အမြင်မတော်တာတွေ့လို့ပါ... ကျွန်တော်တို့က အရာအာလုံးကို လက်ခံပြီးသားပါ... ဒါပေမယ့် ဥပမာလေး တစ်ခုပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ဒီအသက် ဒီအရွယ် အထိရောက်လာတာ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားလို့ ဖြစ်လာတာ... မိဘတွေ ကျေးဇူးကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ စကားကို ဘုရားပြီးရင် ငြမ်းဖျက်ရတယ် ဆိုတဲ့ စကားဥပမာ ကို ထောက်ပါရစေ... ဇော်ဂျီကောင်းသည် ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ဇော်ဂျီ ကြောင့် မြန်မာစာ လောကတိုးတက်လာတယ် ဖွံ့ဖြိုးလာတာ ဆိုရင် ကိုဇက်တီ လက်ခံမလား... လက်မခံဘူးလား... အဲဒါကို အခုမှ ဇော်ဂျီ သုံးလို့ လူမိုက်အားပေးဆိုရင်တော့ ကိုဇက်တီ ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်တော့... ကျွန်တော် ပြောတယ်ဆိုတာ အမြင်မတော်လို့ ဝင်ပြောတာနော့ ... ကျွန်တော်နဲ့ အလွတ်ကြီး... အခု ဒီစာကို ကျန်တဲ့သူတွေ မြင်ရတယ် ဆိုကတည်း ဇော်ဂျီရဲ့ ကျေးဇူးကို မမေ့သင့်ဘူးဆိုတာ တခါတည်း ပြောပါရစေ...
ဒီဟာကတော့ MM3 Unicode ပါ... အညွှန်းနဲ့ လက်ကွက်ပါ တခါတည်း ပါပြီးသားပါ... လိုချင်ရင် သုံးဖို့ ကျွန်တော် တင်ပေးခဲ့တာပါ... တကယ်လို့ မသိသေးရင် ဒီနေရာမှ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်... မေးမြန်းစရာ မလိုလောက်အောင်လဲ သူ့အထဲမှာ ပါပြီးသားပါ... သူပေးထားတဲ့ အဆင့်အတိုင်းသာ သွားပါ... ရမှာပါ..
စကား မစပ် UBUNTU မှာ ပုရပိုဒ် ကို package အနေနဲ့ ထည့်ပေးထားပါတယ်... ဒါပေမယ့် လုံး၀အသုံးမဝင်ပါ... ထို့ကြောင့် စေတန်ဂေါ့ရဲ့ ဇော်ဂျီ ကို ပြောင်းသုံးပါ... အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီနေရာမှ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်....
ပို့စ်ကို သေသေချာချာ မဖတ်ပဲ ကိုယ်ပြောချင်တာချည်းပဲ ပြောနေတော့လည်း ခက်တယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ၅.၁ နဲ့ ဇော်ဂျီကြားမှာ ဝင်ညှိဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဒီပို့စ်
ဇော်ဂျီရဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေ အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဒီပို့စ်
တွေကိုလည်း အသေအချာ ဖတ်ကြည့်စမ်းပါဗျာ။ ယူနီကုတ်မှာ ပါဌ်ဆင့်ရှိသလား လာမေးကတည်းက ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ပို့စ်ကို အသေအချာ မဖတ်ပဲ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ရေးချင်ရာ လာရေးတယ် လို့ပဲ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောပီးပါပကောလား... အားနည်းချက်ရှိတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် မငြင်းခဲ့ပါဘူး... ကျွန်တော်လည်း လက်ခံထားတာပါ... ဒါပေမယ့် ဒီမှာတပ်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်က တော်တော်လေးဆိုးရွားနေလို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် လာဝင်ပြောတာပါ... ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောရရင်ဗျာ ကျွန်တော်က ဘလော့ဂ်တွေ လည်ဖတ်နေတဲ့သူ တယောက်မဟုတ်ပါဘူး... ဖတ်ရင်လဲ အနည်းအကျဉ်းလောက်ပါ... ရေတွက်ကြည့်ရင် လက်နှစ်ဖက် မပြည့်ပါဘူး... ကျွန်တော်တို့် မြန်မာစာတွေ တိုးတက်လာတာ ဇော်ဂျီကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုဇက်တီက ပြောနေတာလား... အဲဒီအရင် MM1 ရှိတယ် ဘာကြောင့် လူတွေ မသုံးသလဲ... အဲဒါစစဉ်းစားပါ... ဂလိုပဲ yahoo,aol,msn တို့ရဲ့ နောက်မှ လာပြီး ကျော်ကြားသွားတဲ့ google ....စဉ်းစားစရာတွေပါ... ဒါတွေဟာ... User ဆိုတာက အဆင်ပြေရာ... သူ့အတွက် ကောင်းရာကိုသာ ရွေးချယ်နေတာပါ... အဲဒါကို လုံး၀ မမေ့သင့်ပါဘူး...ကိုဇက်တီက ပြောတော့ လူမိုက်အားပေး ဘလော့ဂါ... ဒီစာတွေကကော လူမိုက်လုပ်ထားတဲ့ unicode နဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလား...အခုဟာက ကိုဇက်တီက ပြောနေတယ်...ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ၁၅ မိနစ်နဲ့ ပြောင်းလို့ရပါတယ်... တကယ်တမ်းသာဆိုရင် ကိုဇက်တီကိုယ်တိုင်ပြောင်းလိုက်ပါလား... အရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး ပြောင်းလိုက်လေ... သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်လာမဖတ်တော့တာပဲ... ကိုဇက်တီကိုယ်တိုင်က MM3 ကို ပြောင်းလို့ရရဲ့သားနဲ့ မပြောင်းပဲ ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးကို ဒီUnicode ကို သုံးပြီး ရေးထားတာဗျာ... ကျွန်တော်က တော့ရှက်တယ်... တကယ်ပဲ... ကျွန်တော်သာ ကိုဇက်တီနေရာမှာ ကိုဇက်တီလိုမျိုးခံစားချက်မျိုးရှိမယ် ရေးမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး MM3 ကိုပြောင်းမယ်ဗျာ... ပြီးရင် ရေးမယ်ဗျာ... ဒါဆိုရင် ကိုဇက်တီ မှန်တယ်လို့ထောက်ခံလိုက်မယ်... အခုလိုမျိုးဆိုရင် တော့ တော်တော်လေးကို ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ကိုဇက်တီ... မှတ်ချက်။ ။ အမှန်ကိုသာထောက်ပြတာပါ။ ကိုဇက်တီ။ အာဃာတ မရှိကြေးနော်။ ကျွန်တော်သာ ကိုဇက်တီနေရာမှာဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို ပြောင်းပြီးမှ ဒီခေါင်းစဉ်ကို ရေးပါ့မယ်။
ခက်တာပဲ။ ဇော်ဂျီသုံးတဲ့သူကို ဦးတည်ပြီး ရေးချင်လို့ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးတာပေါ့ဗျာ။ ရှင်းနေတာပဲ။ အဲဒါကို မြန်မာ၃ နဲ့သွားရေးလို့ ကျွန်တော် ပေးချင်တဲ့ Message က ဘယ်လို ရောက်မှာလဲ။ လွယ်တာကို ခက်အောင် လာလုပ်နေပြန်ပြီ။
Myanmar1 ကို လူတွေက မသုံးလို့ ဘယ်သူတွေက သုံးသလဲ။ (ခွေးတွေ ကွန်ပြူတာ သုံးတာတော့ မတွေ့ဖူးဘူးဗျ။ :D ) မသိရင်လည်း လေ့လာကြည့်ပါ။ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ့် ဘီဘီစီတို့ ဝီကီပိဒိယတို့ သုံးပါတယ်။ သာမန်လူတွေ ဘာလို့ မသုံးကြတာလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးရင် အလှအပ ကြိုက်တဲ့သူတွေက စာလုံးလှလို့ ဇော်ဂျီကို သုံးတယ်။ ဒါပါပဲ။ Myanmar1 သုံးရတာ အဆင်မပြေဘူး ဆိုတာ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ စကားပါ။ ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာ ၅ လုံးထက်မနည်း Install လုပ်ဖူးပါတယ်။ ဘာပြသနာ မှ မကြုံဖူးပါဘူး။
ဇော်ဂျီကို ထွင်တဲ့အတွက် လူမိုက်လို့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စံနှုန်းကနေ လွဲနေမှန်း သိရက်နဲ့ သိသိကြီးနဲ့ မပြင်ရင်တော့ လူမိုက်လို့ ခေါ်ရမှာပဲဗျ။ ကျွန်တော့်ပို့စ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့လို လို့ သုံးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း လောလောဆယ် လူမိုက်အားပေး တစ်ယောက် ဆိုတာ မငြင်းပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ရှက်စရာလည်း မလိုပါဘူး။
ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း ပြောင်းချင်ရင်တော့ လူမုန်းခံပြီး ဒီလိုပို့စ်မျိုးတောင် လက်ညောင်းခံ တင်မနေဘူး။ ဒီပို့စ်ကို ကန့်ကွက်တဲ့သူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း မပြည့်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်တယ် လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့် အမြင်အရတော့ ဘာလို့ ဇော်ဂျီကို သုံးကြသလဲ မေးရင် စာလုံးလှလို့၊ သူများတွေ သုံးလို့ ဆိုတာကလွဲပြီး တခြား အကြောင်းပြချက် မရှိပါဘူး။
ယူနီကုတ် ၅.၁ ကီးဘုတ် ရိုက်ဖူးတဲ့သူတိုင်း ယူနီကုတ် ဘယ်လောက်လွယ်တယ် ဆိုတာကို သိပါတယ်။ Install လုပ်တဲ့အချိန် Windows XP ပေါ်မှာ Uniscribe DLL တစ်ခု အပိုအနေနဲ့ Install လုပ်ရတာကို ခက်တယ် လို့ ခေါ်တာလား။ အခု Myanmar3 Installer မှာ အကုန်လုံး တစ်ခါတည်း ထည့်ပြီး သွားပြီ။
ခက်တယ်။ User တွေ အတွက် မလွယ်ဘူး ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြစမ်းပါ။
ခက်ရောပဲ... အဲဒါမှ တကယ်ခက်ရောပဲ.. စီဗုံးမှာလည်း ရေးပြီးသွားပါပြီ.. ထပ်တွေ့လို့ ရေးလိုက်တာပါ... ကိုဇက်တီပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော်က သိနေပြီး ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ကိုဇက်တီကမသိဘူးကို... အခုကအဲဒီလိုဖြစ်နေတာ... စာကို သေသေချာချာဖတ်ပါ ကိုဇက်တီ... ပြီးရင် စာရေးတဲ့ သူက ဘာကိုရည်ရွယ်ရေးတယ်ဆိုတာ လေ့လာဖို့လဲ လွယ်သေးတယ်... စာကတော့ လူတိုင်းဖတ်တတ်တာပေါ့... ဒါပေမယ့် အဲဒီစာ ဘာကြောင့်ရေးရတယ် ဆိုတာကို နားလည်အောင်လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး... ကျွန်တော်က ကိုဇက်တီရေးတဲ့ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ သဘောကို နားလည်းထားပါတယ်... အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကို ရေးပြတော့ ကိုဇက်တီက နားမလည်ဘူး ဖြစ်နေတာ... အဲဒီလို... အဲဒီလို... ကျွန်တော်ကိုဇက်တီရဲ့ ဘလော့ဂ်က စာတွေဖတ်ရတာ သဘောကျပါတယ်...ကောင်းပါတယ်..ကိုဇက်တီရေးထားတာတွေ...
ကျွန်တော် ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ကိုဇက်တီ သဘောပေါက်မှာပါ... ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဝေးလို့မရဘူးနော့... ဒုံးပျံခေတ် အမှီလိုက်နိုင်မှ တန်ကာကျမယ်... ကျွန်တော် အပေါ်မှာ စာတွေ ရေးရေးထားတာကို ကိုဇက်တီရှပ်ပြီး ဖတ်ဖတ်သွားပုံရတယ်... ကျွန်တော်ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာကို အခုဒီစာကို ကိုဇက်တီဖတ်နေတဲ့ အချိန်အထိ သဘောမပေါက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်နော့... :P
ခင်ဗျားမေးတာ ကို ကျွန်တော် ဖြေတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက ကျွန်တော် ပြန်ဖြေတာကို မဖတ်ဘူး။ ကိုယ်ရေးချင်တာပဲ ရေးတယ်။ :D
ဒီပို့စ်တွေကို ဘာလို့ ဇော်ဂျီသုံးပြီး ရေးရသလဲ ဆိုတာလည်း ပြောပြီးပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းကို ပြောင်းချင်တဲ့ သူတွေ ကို အတူတူ ဆွဲခေါ်ဖို့ Converter Release လုပ်မပြီးမချင်း၊ ယူနီကုတ် ရိုက်နည်း ရေးမပြီးမချင်း ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးနေပါတယ် ဆိုတာလည်း ပြောပြီးပြီ။ သိပ်မကြာတော့ ပါဘူး။ မြင်ရမှာပါ။
ယူနီကုတ် ၅.၁ ပြောင်းလို့ ကျွန်တော့် ဘလော့ခ် လာမဖတ်ဘူး ဆိုရင်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ ကျွန်တော့် စာဖတ် ပရိသတ်က အရိုးစွဲ သမား ဒုံးဝေးတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း ကျွန်တော် သိတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြောင်းခင်တော့ Unicode နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Knowledge Transfer အရင် လုပ်သွားဦးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ :D
ပြောချင်ရာ ပြောကြစမ်းပါ။ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်။ :P
အင်း...ခက်တော့တာပဲ...ပြောနေတဲ့စကားမှာကိုက တရားပါနေတော့တာပဲ... ဒီဘလော့ဂ်ကို စရေးကတည်းက ဘာလို့ MM1 နဲ့ မရေးခဲ့လည်း... တကယ်သာ ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိရင်လည်း MM1 တို့ ပိတောက်တို့၊ ပုရပိုဒ်တို့နဲ့ရေးပြီးတော့ နေပါလား... အခုတော့ မြန်မာစကားပုံမှာလို " ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးစွပ်တယ်" ဆိုတာလိုဖြစ်နေပါပေါ့လား... ကိုဇက်တီကြီးရယ်... စိတ်မကောင်းလိုက်တာ... အင်း... ပြောပါများ... စကားက ဇာတိပြ ဆိုတာဒါပါပေါ့လား ... :P ... ပျင်းမှာစိုးလို့ လာလာ ပြောနေတာပါ... :D
အဲဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား အိပ်ရာဝင်ရင် ဘီလ်ဂိတ်ကို နေ့တိုင်းမှန်းပြီး ကန့်တော့သင့်တယ်။ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဆိုပြီးတော့။ :P
ကျနော်တော့ ဇော်ဂျီဖွန့်အသစ်လုပ်ပြီးရင် ဇော်ဂျီပဲ ပြန်ပြောင်းတော့မယ်။ :-)
ဟုတ်တာပေါ့..ကိုဇက်တီရယ်... ဘာပဲပြောပြောသူ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီလောက်ဖြစ်လာရတာလေ... စာသင်နေတုန်းလည်း ဘီလ်ဂိတ်ကြီးကို ကြိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်နေတာ... ကျွန်တော်ကတော့ မမေ့ဘူးဗျို့... အဲဒါတော့ တကယ်ပါ... ကျွန်တော့်ဘာသာ ဘာပဲလုပ်လုပ် MS ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး... ကျွန်တော် အခုကြိုက်တာက Linux .. သုံးတယ်... အားပေးတယ်... ဒါပေမယ့် MS ကို မတိုက်ခိုက်ဘူး... မကောင်းမမြင်ဘူး... MS ရဲ့ User တွေအပေါ်မှာ မကောင်းတာ ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပေါ့... ဒါပေမယ့် ကိုယ်မကြိုက်ရင် မကြိုက်သလိုပဲနေလိုက်တယ်... ကိုယ်မကြိုက်လို့.. မသုံးချင်လို့... မကျေနပ်လို့ ဆိုပြီး သူများတွေကိုလည်း မသုံးပါနဲ့လို့ လိုက်မတိုက်တွန်းပါဘူး... သုံးပေါ့... သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် တူတာမှ မဟုတ်တာ... MS သုံးနေတဲ့သူတွေကို အခုချက်ချင်း Linux ပြောင်းဆိုပြီးလည်း မပြောတတ်သေးပါဘူး... ခင်ဗျ... ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်သုံးတတ်ပေမယ့် မသုံးတတ်တဲ့သူ ရှိသလို သုံးတဲ့သူ အကြိုက်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ရှိဖို့လဲ လိုသေးတယ် မဟုတ်လား...ကို ဇက်တီရ... ပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ ဒီဘူတာ ဆိုက်တာပါပဲ... ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ်က အဲဒီလိုမျိုးဗျ... စကားမစပ် ကိုဇက်တီကော Linux ပြောင်းသုံးပါလား... MS က မကောင်းဘူးဆိုရင်ကော... ဘယ်လိုလုပ်မလဲ... ပြောင်းမလား... မပြောင်းဘူးလား... ကျွန်တော်က Linux ပဲဗျို့... MS ကိုတော့ သေတောင် မတိုက်ခိုက်ဘူးဗျို့... ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီအဆင့် ရောက်လာအောင် MS ကိုဖက်ပြီးကြီးခဲ့ရလို့ပဲ... ကျွန်တော့်စကားညီပါတယ်နော်...
ခင်ဗျား စကား မညီပါဘူး။ "ကိုယ်မကြိုက်ရင် မကြိုက်သလိုပဲနေလိုက်တယ်" ဆိုုတာ မှန်ရင် ကိုု ZT ဘာရေးရေး ဘာသိဘာသာ နေပေါ့။ ခုုတော့ အငြိုးကြီး ထားပြီး ပုုဂိုုရေး တိုုက်ခိုုက် သလား အောက်မေ့ရတယ်။ ဖတ်ရင်း သောက်ငြင်ကပ် လာလိုု့ ရေးလိုုက်တာ။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ မန့်တွေကိုသေချာမဖတ်ခဲ့ပဲ ပြောတာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်...စာကို သေချာဖတ်ပါ...
ကျွန်တော် ဒီလိုပြောနေရတာများပြီဗျာ... စာကိုသေချာဖတ်ပါ... ပြီးရင် ရေးတဲ့သူ ဘာပြောချင်တာလဲ ဆိုတာကို သိအောင်လေ့လာပါ... စာကို လူတိုင်းတော့ ဖတ်တတ်တာပဲဗျ... ၄ တန်းကျောင်းသားလေးတောင် ဖတ်တတ်တာပဲ.. ကျွန်တော်တို့လဲ ဖတ်တတ်တာပဲ... ဒါပေမယ့် ဖတ်တာချင်းမတူဘူး... ၄ တန်းကျောင်းသားလေး စာကို ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်သွားတယ်... ဒါပေမယ့် ကိုအမည်မသိတို့ ကျွန်တော်တို့က ဒီစာ ဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ သိအောင်လုပ်တယ်... ကွာတာကတော့ အဲဒါပါပဲ... ကျွန်တော်ကိုဇက်တီကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်လား ဆိုတာကတော့ အပေါ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ စာတွေကို သေချာဖတ်ပြီးရင်... သိအောင်လုပ်... ဒါမှ ဆက်ပြောလို့ရမှာဗျ... ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး... ခက်တယ်... ခက်တယ် ...
စာကို လူတိုင်းတော့ ဖတ်တတ်တာပဲဗျ... ၄ တန်းကျောင်းသားလေးတောင် ဖတ်တတ်တာပဲ.. ကျွန်တော်တို့လဲ ဖတ်တတ်တာပဲ... ဒါပေမယ့် ဖတ်တာချင်းမတူဘူး။ မှန်သည်။ ပုုဂိုုရေး တိုုက်ခိုုက် သလား အောက်မေ့ရတယ် ဆိုုတာက အဲ့ဒီလိုုလုုပ်နေတယ်လိုု့ အဓိပယ် သက်ရောက်နေသလား။ ဒါဆိုုရင်တော့ ကျွန်တော် မြန်မာစာ ပြန်သွားသင်လိုုက်ဦးမယ်။ "ကိုယ်မကြိုက်ရင် မကြိုက်သလိုပဲနေလိုက်တယ်" ဆိုုပြီး လိုုက်ဝေဖန်နေတဲ့ ကိစ လေးကိုုလဲ လင်းစမ်းပါဦး။ ခင်ဗျားရေးထားတာက အပေါ်ယံ ရှပ်ဖတ်တာတောင် လူချင်းမသိပဲ ဒီလောက် သောက်ငြင် ကပ်သွားတာ။ သေချာဖတ်လိုု့ ကတော့ ပိုုဆိုုးရုုံရှိမယ်။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျား ဘယ်တော့ ၅ တန်းတက်မှာလဲ။ လူတိုုင်းကိုု စာသေချာဖတ်ဦး ဖတ်ဦးနဲ့ ။ ကျွတ်ကျွတ် ကျွတ်...
ကဲ... ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပကော... စာကိုသေချာဖတ်ပါလို့... အခုထိစာကို သေချာမဖတ်ရသေးဘူး...ထင်တယ်... စာကိုသေချာမဖတ်ပဲနဲ့ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြောရမှာတုန်း... စာကိုသေချာဖတ်ပါအုန်း... ဒီကနောင်ကြီးရေးထားတာမှာ စာကိုသေချာမဖတ်ဘူးဆိုတာ ပါလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြောပြရမှာတုန်း... ဟူး... ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ... အဲဒီလိုမျိုး ဘာမှန်းမသိပဲ သူများရေးလို့ လိုက်ရေးပြီး... ဘာအကြောင်းအရာ ပြောနေမှန်းမသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို... နောက်အခါ မန့်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်မန့်မယ့်ဟာနဲ့ ကိုယ်ကဘာကို ရည်ညွှန်းချင်တာလဲ ဆိုတာကို... မမေ့နဲ့နော့ ... ဟူး...
အဲဒိ annyomous တွေ ကဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ရှုပ်နေတာပဲ။ ပြောချင်ရင် နာမည်လေးဘာလေးတပ်ပြီး ပြောကြ။ အရှက်မရှိသူများကို တိုက်ခိုက်ချင်ဘီဆိုရင် annyomous လုပ်ပီး ပြောကြတာ မရှက်ဘူးလား။ ခုပြောနေတာလဲ topic နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။
"အဲဒီလိုမျိုး ဘာမှန်းမသိပဲ သူများရေးလို့ လိုက်ရေးပြီး... ဘာအကြောင်းအရာ ပြောနေမှန်းမသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို... နောက်အခါ မန့်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်မန့်မယ့်ဟာနဲ့ ကိုယ်ကဘာကို ရည်ညွှန်းချင်တာလဲ ဆိုတာကို... မမေ့နဲ့နော့။" ဘာကိုု ဆိုုလိုုပါလိမ့်။ ကိုုယ်ဟာကိုု ပြန်နှိပ်နေတာလား။ ၄ ။၅ ခါ သေချာဖတ်လဲ နားမလည်ပါ။ မေးထားတဲ့ ကိစလဲ ခုုထိ မဖြေရှင်းနိုုင်သေးပါ။ သူများကိုု နှိပ်တော့ Bill Gates တွေရော။ Linux တွေရော စုုံလိုု့။ သူပြောခံရတော့ ဘာမှ မဖြေရှင်းပေးနိုုင်ပါ။ တော်ပြီ မပေးလဲ နေပါစေတော့။ ခင်ဗျား စကား မညီဘူး။ ပြောချင်ရာ ပြောတတ်တယ်လိုု့ ပဲ မှတ်လိုုက်ပါပြီ။ ပိုုစ် ပိုုင်ရှင်ကိုု အားနာသောကြောင့် နောက်ထပ် မမန့် တော့ပါ။ ခင်ဗျားကိုု မှာချင်တာကတော့ ဆေးလုုံးလှလှလေးတွေ သောက်ပြီးမှ အိပ်ရာဝင်ပါ။ အိပ်ရာဝင်ခါနီး ငါ့စကားညီဧ။် ဟုု သုုံးခါရွတ်ပါ။ ငါနဲ့ အငြင်း အခုုံ ဖြစ်သူတိုုင်း စာသေချာ ဖတ်လေ့မရှိဟုု နှလုုံးသွင်းပါ။ ဒါပါပဲ။
PS. Sorry ကိုုဇေယျာ
ကျွန်တော် ပြောထားပြီးပါကော... ရေးထားတာတွေကို နားလည်အောင်အရင်ဖတ်ပါလို့... အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ ဘာတွေရေးခဲ့လဲဆိုတာကို... အဲဒါပီးမှ ပြောပေါ့... အခုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဲ တိုက်ခိုက်တယ်ရှိသေး... ခက်တယ်... အဲဒီစကားကိုက စာကိုသေချာမဖတ်ဘူးဆိုတာ ဖော်ပြနေတာပဲ... ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပကော... အပေါ်က Anonymous ကိုယ်တိုင်က သူများတွေမန့်လို့သာ လိုက်မန့်နေတာ... ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုပြောနေတယ်... ဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်... ဘာအကြောင်းအရာ... ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဆိုတာအရင်လေ့လာအုန်း... အမည်မသိ စာရေးသူက ကျွန်တော်ပြောတဲ့ စကားညီမညီ ပြောချင်တာလား... ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က မပြောသင့်ရင်လည်း မပြောဘူး... ပြောရင်လည်း ဘာကြောင့်ပြောရတယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံတယ်... အဲဒီစကားကို ပြန်မပြောဘူးဆိုတာက ပြောရရင် ဒီစာမျက်နှာပြည့်သွားလိမ့်မယ်... ဒါကြောင့် စကားတခွန်းကိုပဲ အခြေအနေအကြောင်းအရာမတူပဲ ပြောရင် အဓိပ္ပါယ်တွေလဲ အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတတ်သေးတယ် ဆိုတာသိပါတယ်နော့ ... ဒါလောက်ပါပဲ... အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်လေးက ဝင်သာပြောတာပါ... ခင်ဗျား စပြီးဝင်ပြောကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ထွက်နေတယ် ဆိုတာတွေ့ထားပြီးသားပါ... တကယ်ပါ... တခါတလေ ဝင်ဝင်မပြောချင်ဘူး... ပြောမိရင်လဲ တချို့သူတွေက ဘာမှန်းမသိပဲ သူတို့လဲ ဝင်ဝင်မန့်တာပဲ... ဘာကိုမန့်မှန်းကို မသိဘူး... အများအားဖြင့် ဘလော့ဂ်တွေမှာပေါ့... ဘလော့ဂ် တော်တော်များများတွေ့တယ်... ဘာကြောင့် ဝင်မန့်မှန်းကို မသိတာ... အဲဒါပဲဗျာ... အခုလဲ တွေ့ပြန်ပြီ... (မှတ်ချက်။ ။ ဘုရားဟောခဲ့တယ်... လူတိုင်းဟာ အရူးတွေချည်းပဲတဲ့...) ကျွန်တော်ဝင်မပြောတာ များပါတယ်... ဝင်ပြောသင့်တယ် ထင်မှ ဝင်ပြောတာပါ...) နောက်ဆုံးကဟာတော့ ဟုတ်သဗျို့... အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်လေးတို့လို့ လူတွေနဲ့ တွေ့ရင် စိတ်ကုန်ပဲဗျို့... ဘာမှန်းမသိ သူများမန့်လို့ လိုက်မန့်နေတဲ့သူတွေပေါ့... အဲဒီညီလေး တယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးနော်... ကိုယ်ဖတ်မိတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာတွေ့ရတယ်... နာမည်ကြီး ဘလော့ဂ်တွေပါ... ဘာမှန်းမသိဘူး လိုက်လိုက်မန့်ထားတာ...